Head Ball 2 – Lalao baolina kitra an-tserasera&Hack – Torohevitra Android Cheats
Head Ball 2 – Lalao baolina kitra an-tserasera&Hack
Head Ball 2 dia mampientam-po sy haingana lalao baolina kitra marobe any amin'izay azonao atao Challenge ny mpanohitra anao!. Atao amin'ny 1v1 -tserasera lalao baolina kitra mifanohitra amin'ny tena mpanohitra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Milalaova lalao baolina kitra 90-segondra; na iza na iza tanjona mihoatra ny tanjona, Fandresena!
Fanamby ny namanao amin'ny fotoana tena izy!
Mahazoa fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny kaonty Facebook anao ary milalao lalao baolina kitra mahafinaritra miaraka amin'ireo namanao, asehoy azy ireo hoe iza no tsara indrindra! Azonao atao koa ny miditra amin'ny ekipa baolina kitra na mamorona ny ekipanao ary mahazo valisoa samihafa rehefa mandresy lalao ianao! Misolo tena ny ekipanao ary mifanatrika, ekipa samihafa, hanehoana hoe ekipa soccer iza no ambony. Mandraisa anjara amin'ny fivoaran'ny ekipanao amin'ny ankapobeny.
Hianjera amin'ny ligin'ny Soccer mifaninana amin'ny ekipanao!
Mifaninana amin'ny 5 ligy baolina kitra isan-karazany ary ataovy izay tsara indrindra vitanao mba hahatratra azy eo an-tampon'ny tohatra. Midira ekipa iray na mamorona anao manokana, na izany na tsia, mahery vaika amin'ny ekipanao ianao! Midira amin'ny fifaninanana isan-kerinandro izay ahafahanao manohitra ekipa hafa manerantany. Arakaraka ny nandresenao ireo ekipa, ny fahafaha-misimisy kokoa miakatra amin'ny Bronze League mankany amin'ny Diamond League! Miadia ny lalanao amin'ny alàlan'ny tena mpanohitra sy lalao baolina kitra sarotra. Tsy azonao fantarina hoe iza no handresy alohan'ny lalao.
Gameplay tsy manam-paharoa
Ny baolina kitra dia ny fandaka ny baolina sy ny hamonoana tanjona, TSARA?
daka, fitokonana ary isao amin'ny fampiasana ny maherifonao. Ampiasao ny tongotrao, lohany, ary hery lehibe hihoarana tanjona. Head Ball 2 manolotra kilalao tsotsotra izay azo ovaina haingana ho lalao feno fihetsiketsehana sy mahaliana. Kapohy ny baolina, mameleza ny mpanohitra anao, mampiasa lohateny, hery lehibe na resaho ny mpanohitra anao amin'ny alalàn'ny azy ireo. Avela daholo ny zava-drehetra, raha mbola mandresy!
Raiso ny fifehezana ny karieranao amin'ny baolina kitra
Mandrosoa amin'ny alàlan'ny maody asa tsy manam-paharoa hamaha bonus manokana, tarehin-tsoratra, sy kojakoja. Rehefa mandroso ianao, lasa sarotra kokoa ny mahazo valisoa, manana izay ilaina ve ianao?
Miavaka amin'ny vahoaka!
Fidio ny toetra tsara indrindra 125 endri-tsoratra tsy manam-paharoa upgradeable, mamoha kojakoja vaovao hanatsarana ny maherifon'ny soccer, ary mamorona ny mpilalao baolina kitra nofinofisinao! Rehefa mandroso ianao, hamaha kianja samihafa ianao ary hahazo mpankafy hanohana anao. Arakaraka ny maha-marimarina kokoa!
Tongava mahery fo farany amin'ny baolina kitra ary asehoy hoe iza no nahazo fomba sy fahaizana bebe kokoa!
Amboary ny toetranao hamaha ny fahafahanao mamorona. Mandrosoa amin'ny alàlan'ny maody asa hamoahana bonus tsy manam-paharoa, Accessories, ary na dia ny maherifo aza. Rehefa mandroso ianao, ho tsara kokoa ny valisoa fa ny fanamby ihany koa. Mahavita an'izany ve ianao?
Tsy misy lalao hitovy tamin'ny teo aloha tamin'ity lalao baolina kitra ity!
-Milalaova baolina kitra amin'ireo mpanohitra tena izy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny fotoana tena izy!
– Fotoana mampihetsi-po amin'ny feon'ilay mpaneho hevitra malaza, John Motson!
-Fifandraisana Facebook hilalao miaraka amin'ny namanao!
-Lalao mavitrika sy manaitaitra miaraka amin'ny sary maloto.
-125 endri-tsoratra tsy manam-paharoa hamaha.
-5 ligin'ny baolina kitra mifaninana tsy manam-paharoa miaraka amin'i 15 fononteny hilalao.
-Fitaovana an-jatony hanatsarana ny maherifon'ny soccer!
-Alaharo miaraka amin'ny ny paikadinao 18 hery havaozina.
-Kitapo karatra misy litera sy entana.
-Mahazoa mpanohana hamoha kianja vaovao.
-Misiona isan'andro hahazoana fahafinaretana sy valisoa bebe kokoa!
Ampidino ny Head Ball 2 hiaina ny fientanam-po amin'ny lalao baolina kitra sarotra amin'ny mpilalao an-tapitrisany eran'izao tontolo izao!
Head Ball 2 dia lalao maimaimpoana hilalao. na izany aza, misy ny sasany amin'ny lalao zavatra azo vidiana amin'ny tena vola. Azonao atao ny manafoana ny fividianana rindrambaiko ao amin'ny toeran'ny fitaovanao raha tsy tianao ity fampiasa ity.
Fifandraisana tamba-jotra no ilaina hilalao.
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: BALL, CheatsHack, Tapaka ny, -tserasera, Soccer
← fifanandrinana miantana 2 – mangalatra&Hack Havoanan'i Steel – mangalatra&Hack →